You are here: Home Literature [Burmese] မွနျမာစကားအသုံးအနှုနျး - လှသမိနျ
1. ပုဂံမငျးဆကျ လင်ျကာ - ပုရိသ
... - မောင်နေလ ပျူခေတ်နှင့်ပုဂံခေတ် နှစ်ခေတ်အတွင်း ကြားကာလဟူ၍ ရှိပါသလော - ရည်စိန် ဗုဒ္ဓရောင်ခြည် နှင့် ပုဂံမြို့ - ရွှေစကြာဦးစိုးမြင့် အနော်ရထာအရင်က မြန်မာနိုင်ငံ - ဗိုလ်မှူးဘရှင် ...
2. ပြူခတျေနှငျ့ပုဂံခတျေ နှဈခတျေအတှငျး ကွားကာလဟူ၍ ရှိပါသလော - ရညျစိနျ
eBook file size: 174 KB ebook pages:4Publication: ၁၉၈၅ ခုနှဈ၊ ဇှနျလ၊ အမှတျ ၆ ထုတျ ဒဂုနျမဂ်ဂဇငျးတှငျ ပါသော ဆောငျးပါး ဖွဈပါသညျ။ download Related Articles ရည်စိန်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
3. စိန့်တိုင်း(စိန့်ပြည်) ဂန္ဓာလရာဇ်တိုင်း၊ ဥတည်ဘွား၊ တရုတ်တရက် ဟူသော အမည်များ၏ဇာစ်မြစ် - ရည်စိန်
eBook file size: 279 KB ebook pages: 15 Publication: ၁၉၈၃-ခုနှစ်ထုတ် ဉာဏ်လင်းဓမ္မစာပဒေသာမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဦးရည်စိန်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
4. ဗိဿနိုးမြို့ ဆိတ်သုဉ်းခဲ့သည့်အကြောင်းရင်း - ရည်စိန်
eBook file size: 262 KB ebook pages: 12 Publication: ၁၉၈၀-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လထုတ် ရတနာမွန်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဦးရည်စိန်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
5. တကောင်းနှင့်ပတ်သက်သော စစ်တမ်း - ရည်စိန်
eBook file size: 196 KB ebook pages:7Publication: ၁၉၈၀-ခုနှစ်ထုတ် ရတနာမွန်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဦးရည်စိန်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ စစ်တမ်းများ ...
6. ပျူတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ မည်သို့ ၀င်ရောက်လာခဲ့သနည်း - ရည်စိန်
eBook file size: 246 KB ebook pages: 8 Publication: ၁၉၈၀-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလထုတ်၊ ရတနာမွန်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဦးရည်စိန်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ပျူနှင့်ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ ...
7. ခရစ်နှစ် ၈/၉ ရာစု ပျူမြို့တော် ဟန်လင်းလော၊ သရေခေတ္တရာလော - ရည်စိန်
eBook file size: 109 KB ebook pages:9Publication: ၁၉၈၄-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လထုတ် ဉာဏ်လင်းဓမ္မစာပဒေသာမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဦးရည်စိန်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
8. ရဟန်းဘောင်ဝင်ခဲ့သော ဂျပန်မင်းသား - ရည်စိန်
eBook file size: 48.5 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၈၆-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလထုတ် ရတနာမွန်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဦးရည်စိန်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
9. သုဝဏ္ဏဘူမိ၏တည်နေရာ - ရည်စိန်
eBook file size: 240 KB ebook pages: 11 Publication: ၁၉၈၅-ခုနှစ်၊ ဧပြီလထုတ် ဉာဏ်လင်းဓမ္မစာပဒေသာမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဦးရည်စိန်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ သုဝဏ္ဏဘူမိနှင့်ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ ...
10. ပျူတပ်မြို့အချို့၏တည်နေရာ - ရည်စိန်
eBook file size: 81.5 KB ebook pages: 13 Publication: ၁၉၈၄-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလထုတ် ဉာဏ်လင်းဓမ္မစာပဒေသာမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဦးရည်စိန်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ပျူနှင့်ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ ...
11. ခရစ်နှစ် ၉ ရာစု ပျူနိုင်ငံ၏ပထ၀ီဝင် အနေအထား - ရည်စိန်
eBook file size: 215 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၈၃-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလထုတ် ဉာဏ်လင်းဓမ္မစာပဒေသာမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဦးရည်စိန်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ပျူနှင့်ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ ...
12. ရှေးဟောင်း တိဗက်-မြန်မာများနှင့် ယင်းတို့ ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့သည့် လမ်းကြောင်းများ - ရည်စိန်
eBook file size: 255 KB ebook pages: 13 Publication: ၁၉၆၉-၇၀ ခုနှစ်ထုတ် မန္တလေးဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်နှစ်လယ်စာစောင်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဦးရည်စိန်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
13. ရှေးတရုတ်တို့ သိခဲ့သော ပျူနိုင်ငံအမည် ပျူဝတ် နှင့် ဗြဟ္မာဝတ် - ရည်စိန်
eBook file size: 57.8 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၈၂-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ် ရတနာမွန်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဦးရည်စိန်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ပျူနှင့်ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ ...
14. ဘီစီ ၂ ရာစု နှင့် အေဒီ ၄ ရာစုနှစ်အတွင်း ရှေးတရုတ်တို့ သိခဲ့သော ပျူနိုင်ငံ အမည်များ - ရည်စိန်
eBook file size: 231 KB ebook pages: 12 Publication: ၁၉၈၄-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် ဉာဏ်လင်းဓမ္မစာပဒေသာမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဦးရည်စိန်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ပျူနှင့်ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ ...